What's So Good About Good Friday? — njem Lee - Official Site
1. Good Friday dị mma n'ihi ihe Jizọs rụzuru site n'ọnwụ ya
Mgbe ọtụtụ n'ime anyị agakwuru ọnwụ, anyị na-abịa ná njedebe nke ndụ anyị ọrụ na-enwe olileanya maka udo fọdụrụ. Ma mgbe Jizọs gara cross, Ọ nọ na-amalite akụkụ kasị mkpa nke ndụ ya ọrụ. Ọnwụ Jizọs bụ ihe karịrị ọgwụgwụ nke a obi kwaa; ọ bụ ogbugbu nke Chineke na atụmatụ ịzọpụta ndị mmehie. Jesus kpebiri na-na mmehie ahụ nke kewara anyị na Chineke ghara, ma ọ bụ dị ka Pọl na-ekwu na ọ, Jesus ama, "-Eme udo site n'ọbara nke Ya cross" (Ndị Kọlọsi 1:20).
Ege ntị na-ewute okwu Galeshia 3:13, "Christ agbaputawo ayi site n'obubu onu nke iwu site n'ịghọ ọbụbụ ọnụ maka anyị-n'ihi na e dere, 'Onye a bụrụ ọnụ onye ọ bụla a kwụgburu n'elu osisi' "
N'agbanyeghị ya dị ọcha, Jesus Christ guzoro n'ebe mmehie, were ikpe na anyị na-akwụ.
1 Peter 3:18 -ekwu, "N'ihi na, Kraịst tara ahụhụ mgbe mmehie, ndị ezi omume n'ihi ndị ajọ omume, ka o wee mee ka anyị na-Chineke ... "
Ụbọchị nke na Ọkpara Chineke e gburu pụrụ ịkpọ ezi ụbọchị, n'ihi na site na ya na anyị na-ada ka ndụ!
2. Good Friday dị mma n'ihi na ọ bụghị na njedebe nke akụkọ
Chineke mere ka O, -atọpụ ụfụ ọnwụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ya ga-enwe site ya. (Ọrụ 2:24)
Ozu Jizọs ghara ịnọgide-esighị ike na-adịghị ndụ. Sunday ụtụtụ, E mere ka o si grave- jupụtara ike na ebube. Ọ hụrụ, ke obụkidem, site ọtụtụ narị mgbe ọnwụ, na adịghị anya mgbe rịgowooro Dị n'Eluigwe.
Ọ bụrụ na Jizọs abụghị bilitere site n'ili, mgbe ahụ, anyị nwere ike na-akpọ nke a "Good Friday." Ọ bụrụ na Jizọs ka dị n'ime ili, M ga-enweghị nnọọ olileanya. A ga-enwe olileanya adịghị na onye mgbapụta maka dara nwoke ma ọ bụ mweghachi maka anyị tiwara etiwa ụwa. Ma anyị maara na a kpọlitewo, na a na-enye anyị ihe mere na-aṅụrị ọṅụ ma na-atụkwasị obi na Ya.
Azọpụta gị abụ iru uju na gị R.I.P. si, n'ihi na Jesus Christ bụ agaghịkwa nwụrụ anwụ. Ọ dị ndụ ma na mma, na Ọ na-achị achị akakan! Good Friday bụ Good News for mmehie dị ka mụ na.
dempsey tapley • August 19, 2013 na 8:44 Abụ • zaghachi
Amber • March 19, 2015 na 10:17 pm • zaghachi
Love this! I am almost reading this 2 afọ mgbe e mesịrị, but it was definitely worth my read and it just inspired me to praise and hope all the more for the future GOD has in store for me and my family in and through JESUS CHRIST! IN JESUS NAME, Amen!